Endrika endrika dokambarotra 20 tena izy. Famoronana an-tserasera
20 karazana dokam-barotra tena tany am-boalohany
Amin'ny fotoana mahamety izany rehefa hisokatra ny varavaran'ny orinasa, iray amin'ireo filàna maika sy maika indrindra an'ny mpandraharaha rehetra sy mpanorina ireo orinasa ireo ny filàna misarika ny saina. Ny fifantohana dia ho toy ny fiara tonga lafatra handresena lahatra ny mpanjifa mety hino fa tena misy ianao NILA mividy vokatra manokana na manaova fifanarahana serivisy manokana. Amin'ny ambaratonga lehibe dia novolavolaina tamin'ny fampielezana doka marobe, fa ny tena marina dia tsy nateraka omaly ny dokambarotra ho sehatra iray, fifehezana misy tantara lava ao ambadika io ary noho izany somary tratra. Ireo maodelin'ny dokam-barotra mahazatra amin'ny alàlan'ny fanohanana an-tsoratra toy ny karatra na peta-drindrina dia manomboka tsy mahomby, noho ny fahombiazana nananany taloha. Amin'ny alàlan'ny fananganana laza ho loharano ho an'ny misarika ny saina ary mivarotra hevitra, dia lasa ampahany amin'ny andiana singa mitovy homogeneous sy mitovy amin'izany. Na aiza na aiza ahitantsika afisy ankehitriny, dia lasa tabataba fampahalalana bebe kokoa noho ny zavatra hafa rehetra izany. Tsy misy ny fandrisihana amin'ny filokana mahazatra indrindra, tsy misy zavatra mandika ny fetran'ny mahazatra sy ny olon-tsotra. Eo no ilana ny famoronana ho loharanom-pamonjy aina.
Ny paikadin'ny dokam-barotra dia manomboka mihasarotra hatrany, mihabetsaka ny famolavolana, ny drafitra. Hevitra vaovao no tadiavina fatratra, mila hevitra vaovao afaka misarika ny sain'ny mpanjifa mety. Ity dia ny dokam-barotra vaovao: Ireto misy ohatra vitsivitsy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » 20 karazana dokam-barotra tena tany am-boalohany
Kitapom-bola ho an'ny orinasa 4 maimaim-poana: sarintsarim-bitsika, flyers, bokikely ary karatry ny orinasa
Jules Henri Poincaré: ny fizotry ny famoronana amin'ny dingana 4